SBS Language | Covid-19: Ma badan yihiin dadka qaba COVID-19 oo aan lahayn calaamadaha lagu garto, mase inaan ka walwalnaa?
Covid-19: Ma badan yihiin dadka qaba COVID-19 oo aan lahayn calaamadaha lagu garto, mase inaan ka walwalnaa?
Labo daraasadood ayaa lagu ogaaday in dad badan oo laga helay coronavirus aysan lahayn xataa hal calaamadaha lagu garto xanuunka. Quburada ayaa ka doodaya in aan dhamaaneen is baarno iyo in kale calaamad iyo calaamad la'aanba.
Waxaa naloo sheegay calaamadaha lagu garto Covid-19 oo ay ka mid yihiin qandho, qufac qalalan, neefta oo kugu dhagta iyo xataa daal.
Waxaa jira daraasada laga sameeyay dalal badan oo lagu eegayay kaysaska COVID-19 oo aan lahayn calaamadaha lagu garto xanuunka. Daraasadahaas ayaa laga sameeyay dalalka Iceland, China Japan iyo Australia.
Qoraal lagu qoray joornaalka araimha caafimaadka JAMA ayay cilmi baarayaal Chinese ah ku ogaadeen in 78 bukaan oo xanuunka laga helay 42.3% aan lagu arag calaamadaha COVID-19.
Daraasada kale oo ay sameeyeen cilmi baarayaal Australian ah ayaa lagu ogaaday in 217 qof oo saarnaa markabka dalxiiska Greg Mortimer in ka badan 10 qofba 8 ka mid ah oo laga helay COVID-19 aysan ka muuqan calaamadaha lagu garto.
Maxay yihiin isu gudbinta xanuunka iyado qofka qaba uusan calaamad lahayn ama inta aysan caalamadahu kasoo muuqan.?
Hay'adda Caafimaadka Aduunka WHO ayaa kala saartay labaadaas nooc.
Kahor calaamada waa waqtiga ka danbeeya marka qofka xanuunku ku dhaco laakiin ka hor inta caalamadaha caabuqu aysan kasoo muuqaan.
Laakiin calaamad la'aanta macneheedu ma ah inuusan qofku sii gudbin karin. Waxaa jira daraasada lagu ogaaday in dad laga helay coronavirus maalin ilaa 3 maalmood ka hor inta aan lagu arag calaamadaha.
Gudbinta calaamad la'aan waa marka caabuqa uu fidiyo qof aan lahayn wax calaamadaha lagu garto COVID-19.
Marka quburadu maxay ka aaminsan yihiin daraasadihii dhawaan la sameeyay?
Professorad Raina MacIntryre, Madaxa qaybra Biosecurity ee machadka Kirby ayaa sheegtay inay jiraan cadaymo badan oo muujinaya in xanuunka ay gudbiyaan dad aan lahayn calaamadaha xanuunka ama ka hor inta aysan calaamaduhu soo bixin.
Waxay soo xigatay daraasado lagu sameeyay xarumo lagu hayo dadka waayeelka ah oo uu xanuunku ka dilaacay iyo melo kale oo lagu ogaaday in 50% kaysaska ama ka badan aysan lahayn wax calaamado ah.
Bilowgii May xarunta lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah,Grant Lodge, oo ku taal xaafada Bacchus, Melbourne ayaa mid ka mid ah shaqaalaha laga helay isagoo aan wax calaamad ah lahayn.
"Ma aha inaan kasii doodno. Waa in laga baaro xanuunka meelkasta oo ay ka jirto qatar ah inuu ku fido ama ha noqoto qoys ama goob dadku isugu yimaadaan calaamado ka muuqdeen ama yay ka muuqaane, haddii kale kaysas ayaa naga hoos baxaya," ayay tiri Prof MacIntyre.
"Waxay qaadataa10-14 maalmood in qofka laga helo unugyada COVID-19, marka la yaab ma ah in baaritaanadaa degdeg ah ee dadka laga baaro unugyada aysan u fiicnayn meelaha xanuunka ka fido."
Quburada qaar ayaan hubin dabeecadaha kaysaska COVID-19 ee uusan qufku calaaamad lahayn.
Sanjaya Senanayake waa qabiir ku taqasusay cudurada faafa oo ka tirsan Jaamacada Qaranka Australia.
Wuxuu soo xigtay daraasad lagu sameeyay China oo lagu soo gabagabeeyay in kaysaska aan calaamado lahayn aysan is karantiilin maadaama aysan wax calaamad ah lahayn.
Bishii Febaraayo, warbixin ay soo saartay WHO WHO China Joint Mission report ayaa lagu ogaaday in bukaanada aysan calaamadu ka muuqan waqtigii xanuunka laga baarayay mardanbe calaamadihii ay yeesheen. Prof Senanayake ayaan hubin in bukaankaas daraasada lagu sameeyay ay xanuunsadeen iyo in kale.
"Dadka daraasada qoray ayaa qirtay in waxyaalo badan aysan wali hubin oo ay ka mid tahay sida loogu kalsoonaan karo qiimaynta in qofka uusan calaamad lahayn sababtoo ah waxaa dhici karta in inkastoo aysan xanuun muuqda dareemayn laakiin aysan 100% caafimaad dareemayn, tusaale ahaan inay fiican yihiin markay nasan yihiin laakiin aysan fiicnayn markay jimicsanayaan?"
Wuxuu soo xigtay daraasado kala duwan oo natiijooyin kala duwan kasoo baxeen sidaas awgeed waxa laga og yahay kaysaska COVID-19 oo aan caalaamada lahayn ay yaraynayso fahamka ku saabsan.
Iceland 50% dadka laga helay Covid-19 wax calaamad ah ma lahayn, Japana 30.8% calaamad ma lahayn, halka daraasad kale oo China laga sameeyay 80% aysan lahayn calaamad.
"Way adag tahay in la ogaado kan saxda ah. In kastoo aan ku dhaw nahay inaan fahano saamiga kaysaska COVID-19 oo aan calaamad lahayn, wali waxaynaan ogayn saamaynta ay ku leedahay fidida kaysaska.
"Taas macneheedu waa in halkii bukaanba ay jiraan 4 kale oo xanuunka sida laakiin aan calaamad ka muuqata."
Prof Ivo Mueller qabiiru ku taqasuusay cudurada faafa oo ka tirsan machadka Walter iyo Eliza Hall Institute of Medical Research.
Wuxuu sharaxayaa in fahamka faafida caabuqa COVID-19 ee aan calaamad lahayn uusan muhiim u ahayn oo kaliya sidii sawir sax ah looga heli lahaa dadka uu ku dhaco caabuqu ee uu sidoo kale saamayn ku yeelanayo saadaasheena ku saabsan sida COVID-19 ku faafi doono bilaha soosocda."
"Iyo wixii laga samayn lahaa ayaa lagama maarmaan u ah si looga hortago mawjadaha labaad ee kaysas cusub iyo dhimashoba," ayuu yiri.
Daraasada lagu sameeyay markabka dalxiiska Greg Mortimer, oo ay saarnaayeen 96 rakaab Australian ah ayaa lagu ogaaday in 217 qof oo saarnaa markabka 128 ka mid ah laga helay COVID-19. Dadka laga helayna, 104 ka mid ah aysan lahayn wax calaamad ah taasoo ahayd 81% kaysas laga helay xanuunka.
"Taa macnehedu waa in halkii rakaab ah oo xanuunsanba ay jiraan 4 aan calaamad lahayn. Taasoo sidoo kale macneheedu yahay in dalalka xanuunka baara dadka calaamadaha leh ay tirada saxdaa ee kaysasku ay 5 laab yihiin tan la sheegi," ayuu yiri Prof.
Prof Mueller ayaa sheegay in fahamka sida runta ah ee ay u faafin karaan dadka sida xanuunka oo aan calaamad lahayn la siiyo mudnaan degdeg ah."
Australia, dadku waa inay isu jirsadaan ugu yaraan mirit iyo bar. Hubi xayiraadaha gobolkaagu ku soo rogay inta qof ee kulmi karta.
In la iska baaro coronavirus hadda wadanka oo dhan waa laga helayaa. Haddii aad isku aragto calaamadaha hargabka ama qabowga, wac dhaqtar oo balan la samyso in lagaa baaro xanuunka ama la xariir lambarka macluumaadka coronavirus oo ah 1800 020 080.
Appka lagu raad raaco xanuunka COVIDSafe ee dawladu soo bandhigtay ayaa hadda dadka ka soo dagsan karaan app store-ka.
SBS waxaa ka go'an inay ku wargaliso bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee Australia wararkii u danbeeyay ee COVID-19.